13-ka Meelod Ugu Caansan India Ee Filmada Lagu Duubo Indhaha Kama Qaadi Doontid (+Sawiro) – Filimside.net
February 21, 2019 Ali Aadan
Waxaan maqaalkan kusoo bandhigi doonan 13 meel oo caan ah kuwaaso ku yaalan gudaha India aflaamta Bollywoodkana waligeed lagu duubi jiray waxaa si fudud loo dhihi karaa waa s13 meelod ugu quruxda badan ee India filmada lagu duubo.
Waa meel xeeb ah kaniisadna ku taalo in badana dalxiis caalamka loogu imaado sido kalena barxad weyna leh waxay kaloo leedahay meel biyaha kasoo shubmaan waxaa goobtaan lagu duubay filmo ay kamid yihiin Dil Chahta Hai, Golmaal, Rangeela, Dhoom iyo kuwa kale oo badan.
Hadimba Mandir, Manali:
Waa Mandir caan ah oo ku yaala Manali sido kalena hader kamid ah goobaha dalxiiska sida wanaagsan loogu tago inkastoo markii hore la nici jiray filmo lagu duubi halkaan waxaa ugu dambeysay Rajesh Khanna filmkiisa Aapki Kasam.
Iyo Rishi Kapoor filmkiisa Heena ayaa ugu dambeysay balse markii dambe dib udhis ayaa lagu sameeyay goobtan waxaana lagu duubay Ranbir Kapoor mashruucisa Yeh Jawani Hai Deewani meel dalxiis loogu imaado ayeena noqotay.
Rohtang Paas, Himachal Pradesh:
Waa meel 51 KM u jirtay Manali waana wado ka sameesan buuro dushooda kuwaaso qaarkood baraf ah soona daataan waxayna ku taala tuulada Himachal Pradesh aflaamta halkaan lagu duubay waxaa kamid ah Jab We Met, Highway, Dev D iyo kuwa kale.
Udaipur Palace, Rajasthan:
Waa qasriyo waa weyn oo ku yaalan gobolka Rajasthan in badana maanta dalxiis loo imaado halkaas waliba aroosyada dadka madaxda ah ama lacagta leh ayaa halkaa ku aqal galaan waa qasriyo waa weyn oo la ijaarto ama la rukunto filmo badan ayaa halkaan lagu duubay sida Ram Leela iyo Yeh Jawani Hai Deewani.
Lasoco Qeybta Labaad..
Isma aan la hey meel ka caansan Taj Mahal ayaa hindi jiree maxaa qaldan 14 ayey galeysaa
Sidey macquul ku tahay